Maamulka Dekedda Berbera ayaa ku soo rogay alaabaha ka soo daga cashuuro dheeraad ah | Somaliland One
Maamulka Dekedda Berbera ayaa ku soo rogay alaabaha ka soo daga cashuuro dheeraad ah
Berbera(somalilandone.com) maamulka Dekedda Berbera ayaa ku soo rogay alaabaha ka soo daga cashuuro dheeraad ah, taasoo culays ku soo kordhisay ganacsatada Somaliland oo hore ba cabasho uga muujin jiray Tacriifadaha wax loogu cashuuro qaarkood.
dekeda berbera11Qaar ka mid ah Ganacsatada alaabaha kala soo dega dekedda Berbera ayaa sheegay in 80% ay dekeddu kordhisay cashuurihii ay qaadi jirtay, waxaanay taasi keentay in ay walaac ka muujiyaan qorshaha cusub ee dekedda ku soo rogtay.
Dekedaha mandaqada ku yaala gaar ahaan Jabuuti iyo Muqdisho ayaa wada qorshe ay kula tartamayaan qiimaha dekeda Berbera, waxaanay u fidiyaan ganacsatada adeegyo iyo tacriifado ka hooseeya kuwa ay Dekeda Berberi bixiso.
Tusaale ahaan dekeda Jabuuti waxa uu ku yimaadaa kontiinarka 40 feet ah ee laga soo raro shiinuhu $900, halka dekeduna ay ka qaadato $1300, waxaanu ku soo fadhiistaa $2200 halkii kontiinar.
Dekeda muqdisho ayaa iyana halkii koontiinar ka qaada afar kun oo doolar halkii koontiinar, halka dekeda berbera halkii koontiinar uu ku yimaado ama laga qaado lix kun oo Dolar ($6000).
Is bar bar dhiga sadexda Dekedood waxa ka soo baxaya in dekeda beriberi ay waajihi doonto tartan xoogan oo sababi kara inay ganacsatada reer Somaliland ka didaan qiimahan cusub, iyadoo marka horeba ganacsatadu inta badan ay soo mariyaan ganacsigooda Dalka Jabuuti.
Lama garanayo sababta dekeda berbera ku kaliftay inay qiimaha tacriifadaha kordhiso iyadoo xilligan lagu jiro duruufo adag oo loo baahnaa inay xukuumaddu indho furan ku eegto, isla markaana fududayso wax kasta oo sahlaya in ganacsiga dalku furfurmo.